फ्यानसँग रोनाल्डोको लुकाछिपी, किन छोपे अनुहार ?
काठमाडौँ । क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोपा डेल रेको खेल अघि एक रेस्टुरेन्ट बाहिर आफ्नो अनुहार छोपेको अवस्थामा भेटिएका छन् ।
नुमान्सियाविरुद्धको खेल अघि रियलका स्टार खेलाडी रोनाल्डो आफ्नो अनुहारलाई कालो स्कापले छोपेर आफ्ना फ्यानहरुसँग लुक्ने प्रयास गरेका थिए । रोनाल्डोले मुख छोपे पनि उनलाई फ्यानहरुले चिनेर पछ्याएका थिए ।
पछिल्लो ला लिगाको खेलमा बराबरीमा रोकिएपछि चर्को आलोचना खेपेको रियल टिमले बुधबार राति कोपा डेल रेको अन्तिम १६ को दोस्रो लिगमा रोनाल्डोलाई आराम दिइएको थियो । नुमान्सियाविरुद्धको पहिलो लिगमा पनि रोनाल्डोलाई आराम दिइएको थियो ।
३२ बर्षिय रोनाल्डो ला लिगामा यस सिजनमा लयमा फर्किन संघर्ष गरिरहेका छन् । लिगको शिर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाभन्दा १६ अंकले पछाडी रहेको रियलका लागि ला लिगामा रोनाल्डोले केबल ४ गोल गरेका छन् ।
च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डोको नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा नयाँ रेकर्ड बनाएका छन् । गएराती सेमिफाइनलको पहिलो लिगमा बायर्न म्युनिखविरुद्धको पहिलो खेलमा जित हासिल गर्दै रोनाल्डोले नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन् । रोनाल्डोले गोल नगरेपनि
च्याम्पियन्स लिगमा रियल म्याड्रिड र बायर्न म्युनिखको भिडन्त, रोनाल्डोले गर्लान त गोल ?
काठमाडौँ । च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लिग रियल म्याड्रिड र बायर्न म्युनिखबीच आज राति हुदै छ । बायर्न म्युनिखको घरेलु मैदानमा हुने यस खेलमा विश्व फुटबलका दुई महारथी क्लबबीच
मेसी बने यसबर्ष धेरै कमाउने फुटबलर, रोनाल्डोले भन्दा २८ मिलियन बढी कमाए
काठमाडौँ । लियोनेल मेसीले यस सिजनमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले भन्दा २८ मिलियन पाउण्ड बढी कमाई गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । फ्रान्स फुटबलले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार मेसीले सय मिलियन पाउण्डको